GridCoin စျေး - အွန်လိုင်း GRC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GridCoin (GRC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GridCoin (GRC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GridCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 075 461.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GridCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GridCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GridCoinGRC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00214GridCoinGRC သို့ ယူရိုEUR€0.00181GridCoinGRC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00163GridCoinGRC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00195GridCoinGRC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0194GridCoinGRC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0135GridCoinGRC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0472GridCoinGRC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00795GridCoinGRC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00284GridCoinGRC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00298GridCoinGRC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0485GridCoinGRC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0165GridCoinGRC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0113GridCoinGRC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.16GridCoinGRC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.356GridCoinGRC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00293GridCoinGRC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00322GridCoinGRC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0663GridCoinGRC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0149GridCoinGRC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.226GridCoinGRC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2.55GridCoinGRC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.81GridCoinGRC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.157GridCoinGRC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0593
GridCoinGRC သို့ BitcoinBTC0.0000002 GridCoinGRC သို့ EthereumETH0.000006 GridCoinGRC သို့ LitecoinLTC0.00004 GridCoinGRC သို့ DigitalCashDASH0.00002 GridCoinGRC သို့ MoneroXMR0.00002 GridCoinGRC သို့ NxtNXT0.178 GridCoinGRC သို့ Ethereum ClassicETC0.000299 GridCoinGRC သို့ DogecoinDOGE0.613 GridCoinGRC သို့ ZCashZEC0.00003 GridCoinGRC သို့ BitsharesBTS0.0823 GridCoinGRC သို့ DigiByteDGB0.0817 GridCoinGRC သို့ RippleXRP0.00719 GridCoinGRC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00008 GridCoinGRC သို့ PeerCoinPPC0.00764 GridCoinGRC သို့ CraigsCoinCRAIG1 GridCoinGRC သို့ BitstakeXBS0.0937 GridCoinGRC သို့ PayCoinXPY0.0383 GridCoinGRC သို့ ProsperCoinPRC0.275 GridCoinGRC သို့ YbCoinYBC0.000001 GridCoinGRC သို့ DarkKushDANK0.704 GridCoinGRC သို့ GiveCoinGIVE4.75 GridCoinGRC သို့ KoboCoinKOBO0.5 GridCoinGRC သို့ DarkTokenDT0.00197 GridCoinGRC သို့ CETUS CoinCETI6.34
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 20:00:03 +0000.